ko htike's prosaic collection: ကျွန်တော်ကြားနေရသော ကျော်ဟိန်း၏ နောက်ဆုံး နေ့များ (၁)
မှန်တယ်ကိုထိုက် ကျော်ဟိန်းမရိုးသားဘူးလို့ ပြောရင်ရတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရဟန်းဝတ်တဲ့ကိစ္စကို ပေါ်ပင်သဘောမျိုးလုပ်နေတယ် သူသိထားတယ်တွေ ပြောမယ် ဟောမယ်ဆိုဘဲ သူ့အတွေ့အကြုံကို လူလိုပြောရင် ကောင်းမယ် ရဟန်းဝတ်ပြောမယ်ဆိုတာ လူစိတ်ဝင်းစားအောင်လုပ်နေတာလို့မြင်တယ်
I feel so sad whenever I hear or read about Buddhist monks being killed by those who believe they are Buddhists. I wonder if this is the beginning of disappearing of Buddhism in Burma because Buddhist monks are killed and jailed and tortured and those who become monks with wrong attitude.
6 September 2008 at 12:12
သံသယာလာည်နေသရ်ျ..ထာဝရ ရှင်သန်နေမယ်ဆိုတဲ....ဦးကျော် တယောက် ဘာသာရေး ခုတုန်းလုပ်ခံရတဲ.သူ မဖြစ်ပါစေနဲ.လို....အကျွတ်တရား တကယ်ရပါစေလို....ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။။။။
ဦးကျော်ဟိန်းဟာ စိန်ဂေါ်လီ ဂိုဏ်သား ကနေ စစ်တပ်ထဲမှာ လဲအမှု့ထမ်းခဲ့ဘူးပါတယ်။ မိန်းမ ကလဲ တစ်ယောက်ထက်မနည်းပါဘူး။ VOa မှာလဲ ခရစ်ယာန်လူငယ် များကို ဟောပြောတာ ကြည့်ဖူးပါတယ်။
ငါဆိုတဲ့ အတ္တနဲ့ လုပ်ခဲ့တော့ ငါမှငါဆိုတဲ့ အစွဲကြီးကို
ဘယ်လိုဖျောက်မလဲ ပျောက်ပြီဆိုတာ ယုံရမှာလဲ။
ဆရာကြီး ဂိုအင်ကာတို့က တရားပြတာ သင်္ကန်း မ၀တ်ပါဘူး.။ ဒါပေမယ့် တစ်ကမ္ဘာ လုံးက လက်ခံကြတယ်။.သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်ကနေပြီး သင်္ကန်း ၀တ်သွားတဲ့ မင်းသားကြီး ဇေယျဆိုတာရှိပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုကို အောင်နိူင်ခြင်းဟာ သူများသိဖို့မလိုပါဘူး ။သူများကို ချွတ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင် အကျွတ်တရား ရမှ ဖြစ်မှာပါ. စားဝတ်နေရေး ငွေကြေးခိုင်မာနေလို့ တရားဘောင်ထဲ ၀င်တယ်လို့ လတ်တလောလူတွေ ထင်သွားရင်.... ဘယ်လိုဟောဟော ကြာနှီကန် ဆရာတော် ဇာတ်ထုတ်တွေလောက် ရယ်စရာ မကောင်း
080中部人聊天室123上班族聊天室 123上班族聊天室 123上班族聊天室 123上班族聊天室 123上班族聊天室 123上班族聊天室 123上班族聊天室 123上班族聊天室 123上班族聊天室 123上班族聊天室 sm聊天室sm聊天室sm聊天室sm聊天室sm聊天室sm聊天室sm聊天室sm聊天室sm聊天室sm聊天室愛情公寓聊天室愛情公寓聊天室愛情公寓聊天室愛情公寓聊天室愛情公寓聊天室愛情公寓聊天室愛情公寓聊天室愛情公寓聊天室愛情公寓聊天室愛情公寓聊天室一夜情聊天室一夜情聊天室一夜情聊天室一夜情聊天室一夜情聊天室一夜情聊天室一夜情聊天室一夜情聊天室一夜情聊天室一夜情聊天室蟲蟲聊天室蟲蟲聊天室蟲蟲聊天室蟲蟲聊天室蟲蟲聊天室蟲蟲聊天室蟲蟲聊天室苗栗人聊天室蟲蟲聊天室蟲蟲聊天室激情成人網愛聊天室激情成人網愛聊天室激情成人網愛聊天室激情成人網愛聊天室激情成人網愛聊天室激情成人網愛聊天室激情成人網愛聊天室激情成人網愛聊天室激情成人網愛聊天室激情成人網愛聊天室激情網愛聊天激情網愛聊天激情網愛聊天激情網愛聊天激情網愛聊天激情網愛聊天激情網愛聊天激情網愛聊天激情網愛聊天激情網愛聊天哈啦聊天室哈啦聊天室哈啦聊天室哈啦聊天室哈啦聊天室哈啦聊天室哈啦聊天室哈啦聊天室哈啦聊天室哈啦聊天室影音視訊聊天室影音視訊聊天室影音視訊聊天室影音視訊聊天室影音視訊聊天室影音視訊聊天室影音視訊聊天室影音視訊聊天室影音視訊聊天室影音視訊聊天室原住民聊天室痘痘聊天室痘痘聊天室痘痘聊天室痘痘聊天室痘痘聊天室痘痘聊天室痘痘聊天室痘痘聊天室痘痘聊天室情色網情色網情色網情色網情色網情色網情色網情色網情色網情色網重車論壇重車論壇重車論壇重車論壇重車論壇重車論壇重車論壇重車論壇重車論壇重車論壇av女優av女優av女優av女優